Esona sidlo Saselwandle Esona sikhulu: Iintlanzi ezibhabhayo kunye neCou Cou ezisuka eBarbados
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Culinary » Esona sidlo Saselwandle Esona sikhulu: Iintlanzi ezibhabhayo kunye neCou Cou ezisuka eBarbados
Umfanekiso ngoncedo lokupheka & neeCocktails
Kuthathwa njengesitya sesizwe saseBarbados, iFlying Fish kunye neCou Cou yeyona ndlela ifanelekileyo yokuzama abathandi bokutya kwaselwandle. Intlanzi emhlophe enencasa, enencasa, enencasa, kunye nezinongo kakuhle inikwa icou cou, umbona osisiseko saseBarbadian. Ngaba ukulungele ukufunda ukwenza esi sidlo saseBarbadian ekhaya?
Uyenza Njani Iintlanzi eziphaphazelayo kunye neCou Cou?
Ukutya kweBarbados yimbiza enyibilikayo enyibilikayo yeencasa ezimileyo ezidibanisa iimpembelelo ezivela eNgilani, eIndiya, naseAfrika ukwenza izitya ezimangalisayo, ezahlukeneyo.
Abapheki be-Bajan basebenzisa isixa esihle seemveliso zasekhaya ezitsha ukwenza ezona zidlo zinencasa ehlabathini. Izitya ze-Bajan eziqhelekileyo onokuthi udibane nazo kwesi siqithi ziquka i-macaroni pie, iikeyiki zentlanzi, irayisi kunye neeertyisi, iiconki, ii-coconut turnovers, kunye ne-Barbados national dish flying fish kunye ne-cou cou.
Ngaphandle kwezitya ezininzi ezimangalisayo eBarbados, namhlanje siza kuthetha nje iintlanzi eziphaphazelayo kunye neeresiphi ze-cou cou kuba ukuba kukho isitya esinye seBajan ongayi kufuna ukuphoswa, yile!
Isidlo sesizwe saseBarbados sisidlo esimnandi kwaye abantu basekhaya banebhongo kakhulu.
Inkwenkwezi yomboniso yintsika yentlanzi ebhabhayo eqhunyiweyo okanye eqhotsiweyo, ehamba necala le-cou cou, elikhumbuza i-polenta okanye i-grits, kwabo bangaqhelananga nokutya. Ijusi yekalika, iziqholo kunye nemifuno emitsha ithatha incasa phezulu, idala isidlo esimangalisayo, esiyinyani seBajan.
Ukuba kunokwenzeka ukuba undwendwele iBarbados kungekudala, kungcono ukuzise umdla wokutya. Siza kukuxelela ngakumbi malunga nesitya kwimizuzu embalwa, kodwa okokuqala, nantsi imvelaphi.
Yintoni iFlying Fish?
Intlanzi ebhabhayo luhlobo lwentlanzi oluzalelwa kwisiqithi saseBarbados. Enyanisweni, ezi ntlanzi zazixhaphake kakhulu kumanzi esi siqithi kangangokuba iBarbados iye yabizwa ngokuba “lilizwe leentlanzi eziphaphazelayo.” Ke, ayizukumangalisa into yokuba iintlanzi ezibhabhayo yeyona nto iphambili kwisitya sesizwe saseBajan.
Iintlanzi ezibhabhayo zibaluleke kakhulu kubantu baseBajan kangangokuba uya kubona uphawu olubonisa intlanzi ephaphazelayo ngemali yesizwe, kwaye ibonakaliswe nakwilogo yeBarbados Tourism Authority.
Usaza kufumana iintlanzi eziphaphazelayo kwiimenyu kwiindawo zokutyela kwisiqithi sonke. Intlanzi ehambahambayo iyakuthanda kakhulu iphekwe ngokulula, ngokutshisa nge-juice ye-lime ene-acidic, kwaye iyamangalisa ethosiweyo. Yiya kwi-Bajan fish fry ukuze uzame iresiphi yemveli yeentlanzi eziphaphazelayo ezinikezelwa ngabemi balapha.
Yintoni uCou Cou?
I-Cou cou sisidlo oya kufumana kakhulu eBarbados, kodwa ayixhaphakanga kakhulu kwihlabathi liphela. Ukuba awuzange uzame ngaphambili, cinga into efana ne-polenta okanye i-grits ekuthungeni.
Yenziwe ngokudityaniswa komgubo wengqolowa kunye ne-okra. Ezi zithako zimbini ziyadibanisa ukwenza uhlobo lwesidudu esinencasa. I-Cou cou e-Barbados sisitya esifudumalayo nesithuthuzelayo esihamba ngokugqibeleleyo kunye nezinye izitya ze-Bajan ezinomsoco - njengentlanzi ephaphazelayo! Ikwayamangalisa ngeesosi eziqholiweyo, oya kuzifumana kakhulu kwi-Bajan cuisine.
Ngokuqhelekileyo, i-cou cou ihanjiswa ngendlela yesintu, ethi iyenze ibe yi-oval shape, kusetyenziswa isitya se-enamel. Okanye, ukuba ufuna ukunyaniseka, ungasebenzisa iqokobhe le-calabash, kwisiqhamo somthi ofunyenwe endle kwitropiki kunye neMelika. ICou cou isenokwenziwa ngezinye izithako, njengesonka sesonka, iiyam okanye iibhanana eziluhlaza.
Iintlanzi ezibhabhayo kunye ne-Cou Cou Recipe
Ngokwemveli, abantu baseBajan bapheka le resiphi ngooLwezihlanu okanye ngeMigqibelo, kodwa ke ukuba ufunda ukuzenza eyakho ungayilungiselela nanini na ufuna! Chukumisa abahlobo bakho kunye nosapho ngale ncasa imnandi yetropiki. Nantsi indlela yokwenza.
Iifillet ezi-4 zentlanzi ephaphazelayo (ukuba ayifumaneki apho uhlala khona, ungatshintsha indawo yolwandle)
I-pinch ye-garlic powder
3 itswele yasentwasahlobo
I-2 iigraves egazini
1 tsp ijinja entsha
Itshilisi yebhonethi e-1
1 tbsp amaqabunga e-thyme
1/2 tsp i-spice edibeneyo
1 tsp igalikhi
5 g ye thyme
10g yomgubo wekhari
5g yomgubo wegalikhi
6 tbsp yeoyile yomnquma
Ye cou cou:
140g umgubo wombona
Yenza isinongo kuqala. Hlanganisa zonke izithako ze-seasoning, ngaphandle kweviniga, kwiprosesa yokutya kunye ne-pulse de idibaniswe kakuhle. Beka i-paste kwisitya esivaliweyo kwaye ungeze iviniga. Gcoba kakuhle kwaye ubeke ngokwezinto ozithandayo. Uya kufuna ukushiya oku malunga neeyure ezimbini ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​ngoko ubeke oku ecaleni ukuze ugalele.
Ixesha lentlanzi ngekalika, ityuwa kunye nepepper.
Beka izithako ze-sauce kwi-pan ye-sauce kwaye uzise ukumisa, ngeoli encinci. Yongeza icephe elinye lesinongo osilungiselele ngaphambili.
Kwipani eyahlukileyo, hlanganisa izithako ze-cou cou, ngaphandle kwe-cornmeal, kwaye uzise kwi-thumba. Uyakufuna oku kubushushu obuphezulu. Emva kokupheka, xuba umxube kwaye ulahle i-anyanisi kunye ne-thyme. Gcina iziqwenga ze-okra ukuze uzisebenzise kamva.
Buyisela i-cou cou pan ebushushwini kwaye wongeze umgubo wombona, uxube kakuhle de wenze umxube ongqindilili. Yongeza kwi-okra.
Isitya sikulungele ukukhonza! Beka i-cou cou epleyitini kwaye uphezulu kwisitya ngasinye ngefillet yentlanzi kunye noncedo olunempilo lwesosi kwaye ujabulele incasa yakho yeBarbados! Okanye mhlawumbi, bhukisha uhambo oluya kwesi siqithi simnandi separadesi.
Ngobubele IiSandals Resorts eBarbados
Eyona ndlela yokungcamla isitayile saseBarbados kukutyelela iRiphabhlikhi eNtsha yaseBarbados!
Iindaba ezingakumbi malunga neBarbados
Oku ngakumbi: Tourism | iAfrika | Barbados | Iimbadada zeembadada
IIndiya iya kuba yindawo entle yokuya ngenqanawa Tourism|
Ngomhla woku-1 kuCanzibe Ingxelo yeWorld Tourism Network Tourism|
IMarike yokuHamba yaseArabia ivulwa ngokusemthethweni Tourism|
Ukuchongwa kwesigulana kwi-Wristbands kwiMarike yoPhando, uLwahlulo, uHlahlelo lwaBadlali abaPhambili kunye noPhando ukusuka ngo-2022 ukuya ku-2030. iAfrika|
Ukuhamba kwabakhweli bomoya phakathi kwe-USA kunye neYurophu ukuya kwi-1,003% Tourism|
iAfrika Barbados Iimbadada zeembadada Tourism
Izindlu zeChampagne zaseFransi zibhiyozela unyaka werekhodi ngenxa ye-bubbly
IJamaica iza kutyikitya iMOU eNtsha kuPhuhliso loKhenketho kunye neSpain
ILufthansa isayine iTyala yayo yokuqala yee-euro ezi-2 zeebhiliyoni ezijikelezayo...
IiNdlela eziPhambili kwiMfundo eziQhubekekayo ngo-2022
IKenya iphelisa yonke imiqobo ye-COVID-19 eseleyo
Imibono yexabiso eliphezulu idibana nezindululo zehlabathi lokwenyani kwi...
Uphononongo olutsha luzisa ithemba kwizigulana ze-tinnitus
I-United Airlines kunye ne-Singapore Airlines yandisa...
I-Airbus A380 yokuqala inikwe amandla yi-100% yoPhapho oluZinzileyo...
I-Ireland iphakamisa zonke iimfuno ze-visa kubantu baseUkraine ...
Ukunciphisa ukulibaziseka ekuFundeni izifo zemiphunga eziyinkimbinkimbi
IRussia isoyikisa 'ngokwenza ilizwe' liqeshiselwe ...
ISeychelles iboniswe kwiMpuma yeMeditera...
IiMfuneko eziNtsha zokuNgena eSeychelles ngaphandle kwe...
IMarike yeMbhobho eDityanisiweyo yeHlabathi eStainless Steel ukuze ikhule kwi-A...
USihlalo weQela le-APO uqeshwe kwiBhodi yeeNgcebiso ze...
I-Rome idibana nemingeni yokuBuyisa uKhenketho...
Ingxelo eNtsha: Ukwahlula i-Alzheimer's yamandulo...